Phinda uthinte oxhumana naye osusiwe, isithombe, irekhodi lokungena kwezingcingo, umyalezo, ividiyo, umsindo, idokhumenti, inothi nokuningi ocingweni lwakho lwe-Android nge-Android Ucingo Lokubuyisela Lokubuyisela Ifayela.
Kugcine ukubuyekezwa ngoJuni 16, 2020 nguJason Ben
Kwashesha kakhulu ngaphambi kokuba ngibone okwenzekile! Ngasusa ngengozi bonke oxhumana nabo ku-Samsung Galaxy ngokuswayipha nje. Kunomhlangano obaluleke kakhulu kusasa futhi ngingumhleli. Manje izinombolo zonke zihambile, ngifisa! Yini engingayenza manje? Ungasusa kanjani ukususa i-Android yami?
Thatha umoya ojulile bese uzola uma izinto ezifanayo zenzeka kuwe. Noma ungalondolozi isipele ifoni yakho, ungabuyisa amafayela asusiwe ocingweni lwe-Android ngezinyathelo ezilula. Ukubuyiselwa kwefayela le-Android kuhlala kukhona ukukusiza ekubuyiseleni amafayela asusiwe ku-Android, uma kwenzeka wephuka ngokungalindelekile, ukuhlaselwa yigciwane, ukulimala kwamanzi, ukuthuthukisa uhlelo noma ezinye izimo.
Khumbula ukuthi uma uqhubeka nokusebenzisa ifoni yakho ngemuva kokulahleka kwamafayela, izokwakha idatha entsha bese ifihla imininingwane ngokuzenzakalelayo yedatha esusiwe. Uma sekuphinde kwabhalwa, imininingwane esusiwe kungenzeka ingatholakali. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uyeka ukusebenzisa ifoni yakho bese uqala ukululama ngayo I-Data Data Recovery ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Landa i-Android Ucingo Ucingo Ukubuyiselwa Kwemininingwane MAHHALA Manje!
Thenga i-Android Ucingo Ucingo Ukubuyiselwa Kwemininingwane Manje!
Phinda ususe iSMS, oxhumana naye, izithombe, ilogi yokushayela ucingo, ingxoxo ye-WhatsApp, amavidiyo nokunye.
Phinda Ubuye Ususe Amafayela kufoni ye-Android nge-Android Data Recovery
I-Android Idatha Ukubuyiselwa Kwethuluzi ithuluzi elisebenzayo elivikelekile, elisheshayo neliphumelelayo le-Android Uma kukhulunywa ngokuqeda amafayela kufoni ye-android. Ivumela abasebenzisi ukuthi babuyisele idatha yomibili kusuka kwisitoreji sangaphakathi se-Android noma ekhadini le-SD. Ixhasa izinhlobo ezahlukahlukene zamadivayisi we-Android kufaka phakathi i-Samsung, HTC, LG, Huawei, Sony nazo zonke izingcingo ezihlakaniphile ezinesistimu ye-Android. Ungathola ukuvikelwa okugcwele kwezithombe, umculo, amavidiyo kanye namadokhumenti. Ngasikhathi sinye, ungakhathazeki ngemininingwane ebalulekile efana noxhumana nabo, imilayezo, okunamathiselwe kwemilayezo kanye nezingodo zocingo.
Bheka izinyathelo zokuthi ungawathola kanjani kabusha amafayela asusiwe. Lapha sizothatha i-Samsung njengesibonelo. Izokwenziwa ngemizuzu nje embalwa.
Isinyathelo 1 Xhuma ekubuyiselweni kwedatha ye-Android
Landa futhi ufake i-Android Data Lokubuyisela kwikhompyutha yakho. Yivule. Xhuma ifoni yakho kwikhompyutha, bese uyivula.
Win Landa Ukulanda i-Mac Win Landa Ukulanda i-Mac
Isinyathelo 2 Vula imodi yokulungisa iphutha le-USB
Uma inguqulo ye-Android I-4.2 noma kamuva, vula Amasethingi. Iya ku Mayelana nefoni, bese uthepha Yakha inombolo Izikhathi ze-7. Guqula Izinketho zonjiniyela kuya on. Uma yehluleka, zama ukuxhumana kabusha noma ukuguqula enye ikhebula le-USB.
Vumela ukulungisa iphutha le-USB. Thepha OK lapho ivela futhi icela imvume.
Isinyathelo 3 Khetha amafayela azophinda atholakale
Manje usungabona zonke izinhlobo zamafayela kule interface. Khetha lezo ofuna ukuzilulama, bese uqhafaza Olandelayo. Kuzothatha imizuzwana embalwa ukuskena yonke imininingwane ekusetshenzisweni yakho.
Isinyathelo 4 Thola iLungelo Lokukhulisa ifoni yakho ye-Android
Isoftware izozama ukuthola imvume yezimpande. Lokhu kuyadingeka ukufinyelela wonke amafayela kwifoni yakho ye-Android, futhi ubumfihlo befoni yakho buvikelwe ngokuphelele. Thepha Vumela uma iqhuma, noma Zama uma uhlelo lehluleka ukukhipha ifoni yakho. Lapho-ke ukuskena kuzoqhubeka.
Isinyathelo 4 Bheka kuqala bese ukhetha amafayela
Lapho ukuskena kwedatha kuqeda, uzokwazi ukubona wonke amafayela kudivayisi yakho. Ikholamu kwesokunxele libonisa izinhlobo zamafayela atholakalayo ukuze alulame. Uma uchofoza Gallery isibonelo ku-Isinyathelo 4, zonke izithombe ezisefoni yakho zizovela ngakwesokudla.
Yazi ukuthi amafayela abomvu yilawo asusiwe noma alahlekile, kanti lawo amnyama yilawo akhona ocingweni lwakho. Qhafaza bonisa kuphela izinto ezisusiwe ukubuka idatha ngokulandelana. Bese uqhafaza Buyisela ukuqeda inqubo. Amafayela owakhethayo azobuyiselwa kukhompyutha yakho.
Uyazi ukuthi uwathola kanjani kabusha amafayela asusiwe kufoni ye-Android manje? Lolu hlelo lokusebenza luyadingeka ngokuphelele futhi alusizi emsebenzini kuphela kodwa nasempilweni. Ngokulanda kwamahhala nesivivinyo samahhala, asikho isizathu sokuthi uphuthelwe i-Android Data Recovery enamandla.
Ungabuyisa Kanjani Izithombe Ezisusiwe Kwisitoreji Sangaphakathi se-Android
Yamukela idatha ye-Android
Ukubuyiselwa kwe-SMS ye-Android
Ukubuyiselwa Umlando Wekholi ye-Android
Ukubuyiselwa Kwevidiyo Ye-Android
Ukubuyiswa kwesithombe se-Android
Phinda ubuyise isithombe kusuka ku-isitoreji sangaphakathi
Ukubuyiselwa kwemiyalezo ye-WhatsApp WhatsApp
Ukubuyiselwa Kwemininingwane Yekhadi le-SD SD
Ukubuyiselwa Kwethoni Yekhadi le-Android Sim
Izinhlelo ze-Android Zokubuyiselwa Kwevidiyo
Ukubuyiswa Kwedatha ye-LG
Ukubuyiselwa Kwemininingwane ye-HTC
Ukubuyiselwa Kwemininingwane YeSony
Ukubuyiselwa Kwedatha yeHuawei
Ukubuyiselwa Kwedatha yeXiaomi
Ukubuyiselwa Kwedatha ye-OnePlus
Ukubuyiselwa Kwemininingwane kaLenovo
Ukubuyiselwa Kwemininingwane Ye-Asus
Motorola Idatha Ukubuyiselwa
Ukubuyiswa Kwemininingwane ye-Nokia
Ukubuyiselwa kwedatha ye-Nexus
Ukuvuselelwa Kwedatha Epholile
Ukubuyiswa Kwedatha yeNokia
Ukubuyiselwa Kwedatha ye-ZTE
Ukubuyiselwa Kwemininingwane Yefoni ye-BlU
Ayikho i-Bin Recycle Bin?
Phinda Pics kusuka SD Card on Android
Phinda Amafayela asetshenziswe kuthebhulethi ye-Android
Ukubuyiselwa Kwefoni kwe-Android